Kala soocida miirayaasha hawada urta siigada iyo sida loo doorto miirayaasha hawada ururiya-Warshadaha News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Kala soocida miirayaasha hawada ururiya iyo sida loo doorto miirayaasha hawada boodhka
Waqtiga: 2021-07-14 Hits: 24
Sifeeyaha hawada ururiya boodhku wuxuu si wax ku ool ah u kala sooci karaa boodhka ku jira gaaska qiiqa. Waxaa guud ahaan loo isticmaalaa kuleyliyaha iyo qalabka wax soo saarka warshadaha si wax ku ool ah looga yareeyo wasakheynta hawada oo wax looga geysto ilaalinta deegaanka. Miiraha hawada boodhka ayaa leh qaabab kala duwan. Kala soocida, iyo qiimaha suuqa, howlgalka iyo ka shaqeynta miirayaasha ka saarida boodhka ee waxqabadka kala duwan way ka duwan yihiin
Miirayaasha hawada ururiyaha boorka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
1. Boorsada hawo-siinta
Sifeeyaha shaandhada hawada ee boorsada ayaa leh sifeyn heer sare ah, wuxuuna kala sooci karaa boorka ku jira qiiqa gaaska ee fara badan. Waxay leedahay waqti dheer oo socod ah iyo waxqabad xasiloon. Miiraha shaandhada hawada ee bacda waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro qaybaha waaweyn ee boodhka ee gaaska qiiqa warshadaha, sida metallurgy iyo tubaakada. , Boorka sifeeyaha, iwm.
2. Mashiinka kalluunka ururiya oo kaligiis istaaga
Mashiinka hal-abuurka ah ee ururiya boodhka ayaa si wax ku ool ah u kala saari kara boodhka, laakiin awoodda ka-qaadista boodhku way yar tahay, guud ahaanna waxay ku habboon tahay goobaha warshadaha ee aan u baahnayn awoodda ka-qaadista boodhka sare.
3 Shaandhaynta hawada ururiyaha boodhka
Mashiinka hawada ururiya urta baaruudda waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo kordhiyo dusha xiriirka ee gaaska qiiqa iyo xalka aqueous si loo dhiirrigeliyo kala-baxa gaaska qiiqa iyo biyaha buufinta, taas oo lagu gaarayo saameynta ka-qaadista boodhka. Dhuxulada miirayaasha hawada boodh-ururiyaha guud ahaan waxay ku habboon yihiin qalabka dhismaha ama macdanta iyo beeraha kale, waxqabadka shaandhayntuna sidoo kale waa mid aad u deggan. Waxaa jira noocyo badan oo miirayaasha hawada sifeeyeyaasha suuqa ku jira. Sidee bay macaamiisha u doortaan? Boorka ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara falanqaynta waxqabadka miirayaasha hawada ururiya. Sidaa darteed, marka aad dooraneyso shaandhada hawada ururiyaha boodhka, waa inaan marka hore si sax ah u baranno kala-baxa boodhka, oo aan doorannaa miirayaasha hawada ururiya ee cabbirka walxaha ee kala duwan iyadoo loo eegayo astaamaha boodh ee kala duwan, si markaa si hufan loo hubiyo waxtarka ugu sarreeya ee sifeynta. Marka labaad, waxaad u baahan tahay inaad faham gaar ah kahesho soo-saaraha shaandhada hawada sibidhka, waxaad ka tixgelin kartaa baaxadda horumarka, dabeecadda adeegga, sumcadda suuqa iyo dhinacyo kale oo badan. Dukaan ka iibso oo isbarbar dhig soo saarayaasha kala duwan si aad u doorato shaandhaynta boodh ka saarista kharash badan. Xaaladaha caadiga ah awgood, miirayaasha boodhka sumadda hawada miirayaasha ayaa ah kuwo lagu kalsoonaan karo. Haddii ay tahay tayada wax soo saarka ama dayactirka ka dib iibinta, miirayaasha miiraha hawada sifeeyaha aad ayaa loo dammaanad qaaday. Waxaa lagugula talinayaa inaad doorato miirayaasha summada halkii aad ka raadsan laheyd sahlanaanta, si aysan u sababi dhibaato dambe
Doorka miirayaasha hawada uruuraha ee wax soo saarku waa mid aad u ballaaran, iyo sifeynta wax ku oolka ah ee boodhka hawada ayaa sidoo kale xaqiijineysa soo-saarista nidaamsan ee shirkadaha waxayna gacan ka geysaneysaa sababta ilaalinta deegaanka. Maalmahan, aqoonsiga miirayaasha hawada boodhka soo uruuriya ee suuqa ayaa sii kordhaya, rajada horumarineed ee warshaduna aad ayey u wanaagsan tahay. Isla mar ahaantaana, ka-qaadidda boodhka
Soo-saareyaasha miiraha ayaa sidoo kale si joogto ah u fulinaya tabo cusub oo teknolojiyad ah, iyagoo ku dadaalaya inay macaamiisha siiyaan adeegyo ka wanaagsan kuwii hore
HOREMaxaad u dooranaysaa shaandhada heerkulka u adkeysata? Waa maxay saamaynta
NEXTHubi hababka nadiifinta iyo dayactirka iyo tillaabooyinka miiraha sanduuqa qaboojiyaha